What is E-commerce and why should we use? - Global Connect Asia
Home/What is E-commerce and why should we use?
Online Trading Business စတင်ဖို့ စဉ်းစားနေပါသလား???
ကုန်ပစ္စည်းများကို ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အညီ online မှ ရောင်းချဖို့ စီစဉ်နေပါသလား……?
Customers တွေကို 24 hrs. service ပေးပြီး error ကင်းကင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်တော့…. GCA ရဲ့ e-commerce platform မှတစ်ဆင့် စတင်ဖို့အကြံဉာဏ်ပေးပါရစေ။
အရင်ဆုံး What Is E-commerce and Why Should We Use ဆိုတဲ့ အမေးများတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေပေးပါမယ်!!!!
E-commerce ဆိုတာ internet ပေါ်မှတစ်ဆင့် မိမိ business ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းခြင်း / ဝယ်ခြင်း / customer များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းတို့အပြင် ငွေကြေးနှင့် အချက်အလက်များကိုလည်း လွှဲပြောင်းခြင်း ၊ ပစ္စည်းများပို့ဆောင်ပေးခြင်း စသည်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တစ်ပြိုင်ထဲအသုံးပြုနိုင်သော software platform ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ E-commerce ရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာတွေများဖြစ်မလဲ??
normal retail store တွေနဲ့မတူတဲ့အချက်ကတော့ location and place အတွက် ကုန်ကျစရိတ်အမြောက်အများ ရင်းနှီးစရာမလိုဘဲ မိမိ business ကို စိတ်တိုင်းကျချဲ့ထွင်နိုင်ခြင်း။
စျေးဝယ်ထွက်ဖို့ မအားလပ်သူတွေအတွက် internet အသုံးပြုရင်း 24 hrs. အချိန်မရွေး မိမိ website ကို customers များ ဝင်ရောက်လေ့လာပြီး စိတ်တိုင်းကျ ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူနိုင်ခြင်း။
မိမိ products ရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို စိတ်တိုင်းကျ စုဆောင်းထားနိုင်ခြင်း / customer များမှ အလွယ်တကူသိရှိနိုင်ခြင်း။
အလွယ်တကူ target customers ရှာဖွေနိုင်ခြင်း / regular customers များနှင့်လည်း မိမိ websites ကို အချိတ်ဆက်မပြတ်အောင် အမြဲ link လုပ်ထားနိုင်ခြင်း ၊ up to date သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပေးပို့နိုင်ခြင်းတို့အပြင် automatic operation processes များကြောင့် cost ပိုမိုသက်သာခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
e-commerce ရဲ့ အားသာချက်တွေကို ပြောပြီးပြီဆိုတော့ GCA ရဲ့ Odoo e-commerce ပါဝင်တဲ့ features တွေကတော့…………..!
Admin ဘက်မှ products များကို categories အလိုက် brand အလိုက် တင်ထားပေးနိုင်သည့်အပြင် best seller productsများ / discount sliders များကိုလည်း promo codes များနှင့်တကွ highlight လုပ်ပေးနိုင်တာမို့လို့ customers များ အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်ဝယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Products တစ်ခုချင်းစီရဲ့ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ image , video နဲ့ product specification , usage, product details တို့ကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Potential customers များ အတွက်လည်း promo codes များ၊ cupons များ၊ gift များ ဖော်ပြထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Customer များအတွက်လည်း user profiles or guest အဖြစ် register လုပ်နိုင်ပြီး check out လုပ်ပြီးပါက contact information များကို ပြန်လည် retrieve လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Purchasing and inventory ဘက်မှာတော့ customer က product ကို click နှိပ်ပြီး ဝယ်ယူလိုက်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် inventory ပိုင်းမှာ အရေအတွက်လျော့သွားမည့်အပြင် admin အနေနဲ့ products quantity , out of stocks products များကိုလည်း report အနေနှင့် အလွယ်တကူ စီစစ်တွေ့မြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Sales data analytics အပိုင်းမှာလည်း revenue အလိုက် best customer များကို ရှာဖွေနိုင်ခြင်း / product တစ်ခုချင်းစီ ​၏ monthly sales / yearly sales များကိုလည်း dashboard မှာ graph များနှင့် အချိန်မရွေး လွယ်ကူစွာကြည့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Payment and delivery systems မှာလည်း customers တွေဘက်မှ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ cash on delivery or bank payment system ကြိုက်နှစ်သက်ရာရွေးချယ်နိုင်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းကို အိမ်အရောက်ပို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်ရဲ့ trend ကိုအမီလိုက်ဖို့ဆို ခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်းမျှောပါဖို့လည်း လိုအပ်သလို ရေစီးကြောင်းအကွေ့အကောက် အနိမ့်အမြင့်ကိုလည်း ကြိုတင်မြင်တတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်…. !!!!!
အများနှင့်မတူပဲ လူကြီးမင်းတို့​၏ Businessကို systematically grow up ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် #GCA Business Solution Company၏ Odoo E-commerce Softwareနှင့်လက်တွဲဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
အခုလို covid ကာလအတွင်းမှာလည်း GCA ၏ Business Consultant များနှင့် Developers များမှ လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းများအတွက် အခက်အခဲများမဖြစ်ရအောင် စိတ်တိုင်းကျ ERP Softwares များကို ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိသောကြောင့် #GCA နှင့် အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ဖို့ အကြံပေးအပ်ပါတယ်ရှင်။
By gcaadmin|2020-11-05T17:06:15+06:30November 4th, 2020|0 Comments